I-PixelStick -I-Mac App yokulinganisa iPixel, ii-angle, umbala kwi-screen
Asanda: 1 / 11 / 20
Iyafuna: IMac 10.6-11.0
I-PixelStick -I-Mac App yokulinganisa iPixel, ii-angle, ubungakanani be-screen esibonakalayo
IPixelStick sisixhobo sokulinganisa umgama (kwiiphikseli)ii-angles (ngeedigri) kunye nemibala (RGB) Kwiskrini. I-Photoshop inomgama, i-engile kunye nezixhobo zombala kodwa zisebenza kuphela kwi-Photoshop. I-PixelStick isebenza kuyo nayiphi na iapp kunye naphina esikrinini nanini na kwaye ixabisa kangangezihlandlo ezilikhulu. Ukugqwesa kubayili, abakhweli, abenzi beemephu, iingcali zebhayoloji, izazi ngeenkwenkwezi, abenzi beemaphu, abayili bemizobo okanye nabani na osebenzisa imicroscope okanye iteleskopu okanye ofuna ukulinganisa umgama kwiscreen sayo nakweyiphi na iwindow okanye usetyenziso.
Cofa apha ukuzama ngoku mahala.
Kulula, kulula kwaye kuyakhawuleza. IPixelStick sisixhobo sokulinganisa onokuthi ucofe kwaye wolule ukulinganisa nantoni na kwiscreen sakho. Sebenzisa i-eyedropper ukukopa imibala kwiifomathi ezi-4 (i-CSS, i-RGB, i-RGB hex, i-HTML) kwibhodi eqhotyoshwayo yokusetyenziswa kuyo nayiphi na iapp.
I-PixelStick sisixhobo sokulinganisa ngobuchule esisetyenziswa ngu:
Abazobi beemephu - iimephu okanye zonke iintlobo.
Iingcali zebhayoloji- kwimicroscopy kunye morphology.
Iingcali zeCSI - kuphando lolwaphulo-mthetho.
Ukuvelisa-kuyilo kunye nokuyila.
I-Physics kunye ne-Astronomers - kuzo zonke iintlobo zemilinganiselo.
Zobunjineli-zoomatshini, ezombane kunye nezobunjineli.
Abakhi - ukulinganisa izakhiwo esele zikho okanye iiplani.
Imfundo-yabafundi, ootitshala kunye nabaphandi.
Abaqulunqi -igrafikhi, uyilo, ngaphakathi, indawo, ulwandle, kunye nearonautical.
Abaphuhlisi beSoftware- kwimizobo, iwebhu, ubeko kunye nomsebenzisi.
Iingcali zonyango - ze-X-ray, i-ECG, i-EKG, kunye ne-microscopy.
Nabani na ofuna ukulinganisa izinto kwi-Mac.
Nabani na onokusebenzisa iPixelStick kuba kulula ukuyisebenzisa, ilula kwaye iyakhawuleza. Linganisa nge:
I-retina, imiboniso rhoqo kunye nabahloli abaninzi.
Naluphi na usetyenziso kunye phakathi kweapps.
Ixhasa ukukalwa kwiimephu zikaGoogle, iimephu zikaYahoo, kunye neFotohop. Ikwanokhetho (lokulungiswa komsebenzisi) ngokwezifiso. IPixelStick sisixhobo sokulinganisa onokuthi ucofe kwaye wolule ukulinganisa nantoni na kwiscreen sakho. Kufana nomlawuli osescreen onokuthi uwusebenzise ngokuthe nkqo, ngokuthe tye nangayo nayiphi na i-engile yokulinganisa umgama (iipikseli), ii-angles (iidigri) nokunye okuninzi ngokurhuqa. Xa usazi isikali soxwebhu olulinganisayo emva koko unokwenza umlinganiso wesiko ukulinganisa i-intshi, iimayile, iisentimitha, ii-microns, i-parsecs okanye i-lightyears.
Uninzi lwento iPixelStick ayenzayo icacile. Tsala iziphelo zokuguqula umlinganiso. Cofa izitshixo ukuvimba intshukumo. Yivule, dlala ngeenxa zonke, akusekho mida kwi-app enye kumlinganiso, umgama kunye nombala.
Ilula, ilula kwaye iyakhawuleza. I-PixelStick sisixhobo sokulinganisa onokuthi ukhonkxe kwaye wolule ukulinganisa nantoni na kwisikrini sakho xa usazi isikali
Khangela oku isikrini kwi-GigaOm ebonisa iPixelStick iyasetyenziswa.
IPixelStick inomdla ngokupheleleyo kwaye isebenza ngokuchanekileyo kanye ngendlela onokuba nethemba ngayo. IPixelStick ihleli kweyona ndawo iphambili kwiscreen. Tsala iindawo zokugqibela ukutshintsha imilinganiselo. Cofa izitshixo ukunyanzela intshukumo. Tsala ukutshintsha i-engile. Jonga utshintsho kunye nolwazi kwincinci ekwiphaneli yolwazi lwescreen.
I-PixelStick isebenzisa inkqubo yokuLungelelanisa iCartesian njengesixokelelwano se-OS X. Oku kuthetha ukuba imvelaphi (pixel 0,0) ikona esezantsi kwikona yesikrini. Nangona kunjalo, i-OS X isebenza ikakhulu kumanqaku, ngelixa iPixelStick imalunga neephikseli. Ipeyinti ayinabubanzi kwaye ihlala phakathi kweephikseli.
I-PixelStick inika ingxelo zombini umgama we-pixel kunye nomehluko we-pixel.
Kumzekeliso ongezantsi, ukuphakama komfanekiso ziiphikseli ezili-13, ke umgama uxelwe njenge-13.00. Qaphela ukuba isiphelo sedayimani sikwi y = 1, isiphelo sesangqa sikwi y = 13. Kungoko umahluko wepikseli uli-13 - 1 = 12. Umgama wepikseli uquka ububanzi beepixelStick endpoints. Oku kwenzelwa ukuba eyona nto ilinganisiweyo ixelwe. Umahluko wepikseli uthintela ulungelelwaniso.
Xa ulinganisa, beka iindawo zokugqibela ngaphakathi kwendawo ukuba zilinganiswe. Eyona ndlela ilula yokufumana yonke imilinganiselo yendawo kukubeka isiphelo sendlela ngqo encotsheni yekona. Emva kokulinganisa ukuphakama (bona umzekelo), isiphelo sendawo yokujikeleza sinokutsalwa. ngaphaya kwelinye ikona ukuze ufumane ububanzi.
IPixelStick ifuna iMac OS X 10.6 okanye kamva.
Ndisebenzise inani labalawuli bekhusi abahlukeneyo kule minyaka, kubandakanya uMlawuli wasimahla kunye nabalawuli bezixhobo zeArt Directors Toolkit. Kodwa akukho nto isondela kwiPixelStick.
I-PixelStick yahlukile. Akukho balawuli banokuvala ukujonga kwakho kwesikrini. Endaweni yoko, iPixelStick ibonisa umtya wokulinganisa. Tsala iindawo zokugcina ukulinganisa umgama. Ukulinganisa ukuphakama kunye nobubanzi, beka iindawo zokuphelisa kwiimbombo, emva koko tsala isiphelo esinye kwikona eliyahlukileyo ukulinganisa ubukhulu. Uyakwazi ukutshixa iziphelo ukuze unyanzele ubude okanye i-engile, okanye uqhwabe umgca kwi-engile yama-45 ° esondeleyo. I-PixelStick ikwabonisa izikhokelo zokukunceda ngokukhawuleza ulinganise okanye ulungelelanise izinto xa ujonge.
Okukwintsusa: Ukuba ufuna ukulawula ikhusi lakho, musa ukusebenzisa irula, gungqisa iPixelStick. ”
URobert Ellis, Upstart Blogger
IPixelStick sisixhobo sokulinganisa imigama, ii-angles kunye nemibala kwiscreen. IfotoShop inomgama, ii-angle kunye nezixhobo zombala kodwa zisebenza kuphela kwiPhotoShop. I-PixelStick isebenza kuyo nayiphi na usetyenziso kwaye naphi na kwisikrini nangaliphi na ixesha kwaye ihlawula amaxesha aphantsi.
* Abaqulunqi -igrafikhi, uyilo, ngaphakathi, indawo, ulwandle, kunye nearonautical.
* Abaphuhlisi beSoftware- yemizobo, uyilo kunye nomsebenzisi.
* Abazobi beemephu - kwiimephu okanye zonke iintlobo.
* Oochwephesha kwezonyango-kwii-X-reyi, kwi-ECG, kwi-EKG, nakwimicroscopy.
* Iingcali zebhayoloji- kwimicroscopy kunye morphology.
* Amagcisa eCSI - kuphando lolwaphulo-mthetho.
* Ukwenziwa kwemveliso-kuyilo kunye nokuqamba.
* Iifiziksi kunye neenkwenkwezi-zazo zonke iintlobo zemilinganiselo.
Ubunjineli-boomatshini bobuchwephesha, bombane kunye nobunjineli.
* Abakhi - ukulinganisa izakhiwo esele zikho okanye iiplani.
* Imfundo-eyenzelwe abafundi, ootitshala kunye nabaphandi.
… Nabani na ofuna ukulinganisa izinto kwi-Mac.
Nabani na onokusebenzisa iPixelStick kuba kulula ukuyisebenzisa, ilula kwaye iyakhawuleza.
Imilinganiselo yanamhlanje yoku:
* I-retina, imiboniso rhoqo kunye nabahloli abaninzi.
* Nayiphi na iapp kunye phakathi kweapps.
I-PixelStick sisixhobo sokulinganisa onokuthi uyincine kwaye wolule ukulinganisa nantoni na kwisikrini sakho.
Sebenzisa intlanzi ukukhulisa nantoni na kwisikrini.
Sebenzisa i-eyedropper ukukopa imibala naphina kwindawo esweni yakho kwiifomathi ezi-4 (i-CSS, i-RGB, i-RGB hex, i-HTML) kwibhodi eqhotyoshwayo ukuze isetyenziswe nakweyiphi na iapp.
Kufana nomlawuli osescreen onokuthi uwusebenzise ngokuthe nkqo, ngokuthe tye nangayo nayiphi na i-engile yokulinganisa umgama, ii-angles kunye nokunye okuninzi ngokurhuqa. Sebenzisa iphalethi kunokutshixa imigama neeengile (ikwasebenzisa iqhosha lokushiya).
Ixhasa ukukalwa kwemephu zikaGoogle, iimephu zeYahoo, iifoto zeFotohop kunye nezinto ezikhethiweyo ezikalini.
-itshintshe ikhowudi yempompo yomsitho
I-macos catalina 10.15 ngoku ifuna imvume yomsebenzisi "yokurekhoda isikrini" ukuvumela ii -apps ezifana ne-pixelstick ukubona iziqulatho zesikrini. ngoku ilungisiwe
-xa usakha i-pixelstick ene-xcode engu-10 nangaphezulu: iwindow ayisabonakali, ngoko ubona i-pixelstick kuphela kwimvelaphi engwevu egubungela lonke isikrini. ilungisiwe ngoku.
ukuba unawo nawuphi na umba qinisekisa ukuba awuhloli kwaye ujonga iimvume ze-pixelstick kubumfihlo: ufikelelo, ubumfihlo: ukubeka iliso kunye nokugcinwa ngasese: isikrini.
-xa usakha i-pixelstick ene-xcode engu-10 nangaphezulu: iwindow ayisabonakali, ngoko ubona i-pixelstick kuphela kwimvelaphi engwevu egubungela lonke isikrini. nayo le nto iyalungiswa.
-Ukuba unawo nawuphi na umba qinisekisa ukuba awuhloli kwaye ujonga iimvume ze-pixelstick ngasese: ufikelelo, ubumfihlo: ukubeka iliso kunye nokugcinwa ngasese: screenrec Record.
-lungisa i-0's ibonakalise indawo yesangqa kunye nesikwere kwipaneli yephikseli yabantu abathile. Oku kwenzeke ukuba kwindlela yokhetho lwenkqubo: ulawulo lwezinto ezinqwenelekayo "Izinto eziDaliweyo zinezindawo ezahlukileyo" bezingakhange zithathwe. Oku, njengoko unokucinga, kunzima ukufumanisa. Siyaxolisa ngokulibazisa. Le nguqulo iyisombulula loo nto. ii-sys ezikhethiweyo ngoku zinokubekwa nangayiphi na indlela. Awudingi ukutshintsha naluphi na useto.
ukuphuculwa okukhulu kusendleleni.
OKUBALULEKILEYO: NgePixelStick 2.12 ngoku icebisa ukuba isikali sayo esingagqibekanga isebenzise ii-organicates ezixelwe ngqo yi-macOS. Ngaphambili ibizilinganisa ezo zihlanganisi isikrini esixhomekeke "kwisekeli exhasa" (ngesiqhelo 2x kwizikrini zeRetina).
Nangona kunjalo "isikali esibuyisela umva" ayihambelani neepikseli ezibonakalayo kuba ii-macOS zixhasa iindlela ezahlukeneyo zokwenza umlinganiso ngokuThetha ukuKhetha, ekungekho nalinye elitshintsha umlinganiso oxhaswayo oxeliweyo ziMacOS kwiiapps. Ukudibana notshintsho lwangaphambili 'iilungelelaniso ezigciniweyo, iPixelStick iya kuqhubeka nokusebenza
ukukala uze uvule ukhetho lwePixelStick kwaye ukhethe "Sebenzisa iziququzeleli zeMacOS".
[Entsha] iphinde yaphinda ikhowudi ye-loupe ukuze imifanekiso yesikrini eyandisiweyo inekrisimesi enkulu kwaye ayibandakanyi iikopi ezikhulu zokugqibela kunye nezikhokelo zikaPixelStick.
[Ukulungisa] Thintela imeko kwezinye iinkqubo apho isikhombisi sivele endaweni yokuphelisa kunye nemibala yokuthatha imibala (kwaye ke ikhulisiwe kwaye ithintelwe ukukhetha umbala).
[Ukulungisa] Susa isakhelo esibomvu ekufumanekeni kwesixhobo esikrinini.
[Fix] Thintela i-PixelStick ekuxeleni ububanzi bekhusi njengoko liphindwe kabini inani leengxelo zeepikseli ze-macOS. (Le yeyona ngxaki iinguqulelo zangaphambili zePixelStick isebenzisa isikali sokuxhasa umfanekiso weRetina.)
[Ukulungisa] Ukulungisa imilinganiselo Iingxelo zePixelStick xa ususa iPixelStick ukusuka kwisikrini seRetina ukuya kwisikrini esingeyo-retina.
[Lungisa] I-Redraw kwaye, ukuba kukho imfuneko, hlela iziphelo ze-PixelStick xa isikali somboniso sitshintshwa ngokuthanda ukuKhetha.
[Ukulungisa] Ukunciphisa uphinda-phindo lwezibalo ezithile zangaphakathi, ukuphucula ukungqinelana phakathi kwemilinganiselo engafakwanga kunye ne-scaling.
[Ukulungisa] Zoba izikhombisi zesangqa ngokuchanekileyo kwizikrini zeRetina.
[Lungisa] Phucula indlela yokuziphatha xa uhlela amanani ngokuthe ngqo kwipaneli.
[Lungisa] Cofa kabini kwi-palette yesihloko kuphela ukuba uchithe iphalethi. Oku kuthetha ukunqakraza kabini ngaphakathi komxholo wephalethi ngoku ukhethe ngokuchanekileyo okubhaliweyo kokuhlela endaweni yokuwa kwefestile.
Imowudi entsha yemephu yokulinganisa ii-angles zanda ngeewotshi. Xa udityaniswa nokubeka isiseko kumgca othe nkqo, oku kuhle ngokuthwala imephu. [mod] Ukuhlaziywa kuhlobo olukhuseleke ngakumbi lwesakhelo sokuHlaziya seSparkle. [mod] Incwadana yemigaqo ihlaziyiwe ukuchaza imephu. Isikhokelo silapha: https://docs.google.com/document/d/1KqDl9z-s0jOYSFL-YB5XR-NDN0YKRVLVG0N9eHYhjAU/edit
OKUBALULEKILEYO: Ukuba unayo ingxelo engu-2.5 kuya kufuneka uyikhuphele ngesandla kwaye uyitshintshe kunye nenguqulo endala kwisiza sethu.
[entsha] Ukhumbula isikali sokugqibela esisetyenzisiweyo kunye noseto lwe-eyehlo. [Entsha] ngoku angakwazi ukulinganisa ii-angles kwisiseko esingagudanga. [mod] I-angle kunye nobude ngoku buboniswe ngokuchanekileyo ngakumbi (okt ayijikeleze amaxabiso apheleleyo).
[mod] Iyahambelana neMac OS 10.6 - 10.11
Isimo sokhetho lomsebenzisi olukhethiweyo lokubonisa okanye lokufihla ithamo elibonisiweyo xa utsala amanqaku. [entsha] Umiselo lomiselo lokhetho lomsebenzisi lokubonisa okanye lokufihla iigridi ngaphakathi kwiqhekeza (xa ibonisiwe ilog).
[lungisa] I-Loupe jonga ngoku isebenza kwi-OS X 10.6 (ngaphambili ibinokuvela kwi-OS X 10.7 okanye ngaphezulu).
[lungisa] Yenza ukuvala ukhetho kwiwindows yokuziphatha ngendlela esemgangathweni ngakumbi. [lungisa] Buyisela i-icon engekhoyo ye-app kwaye ubandakanye iinguqulelo ze-hi-res.
[entsha] Inkxaso ye "izikrini zineendawo ezahlukileyo" okhetho lomsebenzisi olukongezwa kwi-OS X Mavericks.
[mod] edityaniswe ne-xcode 6.1.1 [mod] ehambelana neMac OS 10.10 - 10.6
[Imiselwe] Umbala okhethiweyo ubonakalisa umbala ongalunganga kulungiselelo oluthile lwesikrini, ngakumbi xa izikrini ezilandelwayo zilungiswe ziphezulu okanye zisezantsi kwesikrini.
[ehleliweyo] I-Loupe engandisi ndawo ichanekileyo yesikrini kwizikrini zesekethe kwezinye iinkqubo zesikrini.
[indawo emiselweyo] Ukuseta kwakhona isikhundla kunokukhokelela kwiziphelo ezishenxisa ngaphandle kwesikrini amanye amalungiselelo escreen.
[elungisiweyo] I-PixelStick ayongeli kwisikhala esitsha sokutyhilwa xa amalungiselelo escreen atshintshwa ngelixa iPixelStick isebenza.
[zihleliwe] Uqhekeko kwi-OS X Maverick nangaphezulu xa ukhetha i "screen mambo" umphathi ngaphezulu kwesinye.
[entsha] le nguqulo ngoncedo lwenkqubo yeendwendwe u-Bernie Maier we-australia. enkosi kufuneka ibhekiswe kuye ngesi sipho seholide. UBernie uchonge imiba ngenkxaso yemultiscreen kwaye wayilenga kwaye wayikhonkotha kwaye wenza nolunye uphuculo. Umbulelo omkhulu kuye ngesakhono sakhe sokuphakama ngokukhawuleza ukuze ukhawuleze, uqonde kwaye wenze igalelo elikhulu kwiPixelStick.
[lungisa] iintlobo ezahlukeneyo zokuphucula. [ehlaziyiwe] ii icon kunye nemizobo ethile
[lungisa] ukukhutshwa kwabasebenzisi beMac OS 10.6 kungasebenza ngo-10.5 (asikwazi kuvavanya, usazise). OKUBALULEKILEYO: Abasebenzisi be-Mac OS 10.7. Nceda uqiniseke ukuba unayo iMac OS yokugqibela efakiweyo. I-PixelStick ayizukuvula ngaphandle kokuba i-10.7.5 inehlaziyo lwamva nje. Isizathu sokuba le app ikhowudi isayiniwe kwaye isebenzisa umgcini-sango (iiapile zokhuseleko) kunye ne-10.7.5 yahlaziywa ukuphatha loo nto. Ulwazi lolohlaziyo lulapha: http://support.apple.com/kb/DL1599 ?viewlocale=en_US&locale=en_US
[mod] Imizobo ehlaziyiweyo, ii-icons kunye nomsebenzi we-retina shows (enkosi kumsebenzisi weDamien).
[lungisa] izikhombisi zinyamalale phantsi "kombhoxo ongabonakaliyo". oku kuyenzeka xa usebenzisa imiboniso eliqela okanye utshintsha nje isisombululo sescreen (enkosi kumsebenzisi kaColin Murray's).
[ukulungisa] isikhundla sepaneli enkulu asigcinwanga kwiinguqulelo ezindala ze-OS X (ngenxa yomsebenzisi uChris Pritchard).
[ii] icon ezintsha.
[mod] ikhowudi yokuphuculwa kunye nokudityaniswa nge-xcode 4.4.
[mod] ukuphuculwa kwamaxwebhu.
[entsha] ityikitywe yiplamu emangalisayo ngesitifiketi sonjiniyela weapile ukulandela izikhokelo zokhuseleko zangoku.
[entsha] i-100% iyahambelana neMac os 8. ukuphuculwa okungakumbi okuzayo ...
[mod] yongeze into ye-5-th kwimenyu yefomathi yemibala RGB
[mod] phinda ubhale ikhowudi ejongene nepaneli yentsimbi ye-100% (Mac OS 10.7) ehambelana.
[mod] I-100% yengonyama (iMac OS 10.7) iyahambelana.
[new] eyedropper ibonisa umbala ophantsi kwesikhombisi ngeendlela ezi-4 (css, html, rgb integer, rgb hex)
[new] eyedropper ikopa umbala phantsi kwesikhombisi usebenzisa ikopi (umyalelo c) kwifomathi ekhethiweyo.
[entsha] ukujonga okusondeleyo kuboniswe phantsi kwesikhombisi.
[utshintsho] lomsebenzisi lutshintsho kunye nokongezwa.
ikhowudi [mod] ikhowudi ehlaziyiweyo, eyenziwe yaphuculweyo.
[ezintsha] zenziwe ukuba zenziwe ngokokulinganisa ukongeza kwitemplate zikaGoogle kunye neemephu ze-yhoo nakwiifoto.
[Lungisa] ukhuphele kwaye unamathisele kwingxoxo yobhaliso.
Abasebenzisi bayarhuqa malunga nePixelStick kwiMacUpdate
Cofa kwinombolo yenguqulo ukuze ufumane loo nguqulo yakudala yePixelStick.
Le ikhonkco kwi-changelog enokuthi incede ekufumaneni uguqulelo lwe-Mac OS endala. Iya kuvula kwithebhu entsha, ishiye le festile ivulekile
Kufundwa amaqondo obushushu elwandle (SST) aMfanekiso weSatellite usebenzisa iPixelStick kwiMac
Ukusetyenziswa kwePixelStick ku-Navigation nakwiKhathuni.
I-PixelStick esetyenzisiweyo kuyilo lweGrafiki
Apha ngezantsi kukho isikrini esivela eGigaOM
Ukusetyenziswa kwePixelStick kwiMeteorology, Climatology nakwi-Atmospheric Physics.
IPixelStick KuYilo yeSithethi
Nalu ikhonkco kwinqaku loyilo lwesithethi. (ngaphezulu)
I-Demo elula yePixelStick
Sazise ukuba uyisebenzisa njani iPixelStick ukuyifaka apha.